आफू सुत्ने सिरान मुनी तुलसीको ५ पात राख्नुस अनि हेर्नुस यस्तो चमत्कार !! – Chautari Online
आफू सुत्ने सिरान मुनी तुलसीको ५ पात राख्नुस अनि हेर्नुस यस्तो चमत्कार !!
October 23, 2020 313
तु’लसी’ ए’उ’टा वि’रु’वा मा’त्र हो’इ’न य’स’को वहु’उ’प’योगी गु’ण छ ।औ’ष’धी’य गु’ण’का रु’प’मा तु’ल’सी ज’ति म’हत्वपू’र्ण छ ‘धा’र्मीक रुप’मा प’नि हि’न्दु ध’र्म’मा नि’कै प’वि’त्र मा’निन्छ । हि’न्दु ध’र्म’मा तु’ल’सी बि’ना ध’र्म संस्का’र प’नि’ पु’रा हुँ’दैन । वि’ज्ञान’ले स’मे’त तु’ल’सीको फा’इदा’का बा’रेमा धे’रै कु’रा’हरु पुष्टि गरि’सके’को छ ।
तु’ल’सी धेरै रो’ग’को औ’षधी’का ‘रुप’मा प’नि प्रयो’ग ग’रि’न्छ । ”तुलसी’ले चि’सो, रु’घा खो’की र सा’स स’म्बन्धि रा’गे लगा’यत’मा ‘औष’धीका रु’प’मा प्रयोग ग’रिन्छ । को’रो’नाको सम’य’मा अ’हि’ले ने’पा’लीको धेरै ज’सो भा’न्छा’मा तु’लसी’को पा’त प्र’यो’ग ‘हु’ने ग’रे’को छ । औ’ष’धीको गुण’ले भर’पूर्ण तुल’सी’को पा’त रा’खे’र प’का’एको पा’नी खाँ’दा प’नि रु’घा खो’की लगा’यत स’मस्या स’माधा’न ‘हुन्छ ।
श’र’द ऋतुभर स’बै प्रा’णीका ला’गि तुल’सी’लाई म’हाऔषधि मा’निन्छ। यी बाहे”क अन्य प’नि धेरै छ’न् तु’लसी’का फा’इदा’हरु र’हे’का छन् । रा’ति सु त्ने सम’यमा सि’रा’नी मुनि तुल’सीको पाँ’च पात’ राखे’मा तपा’इँको जी’वन’मा धे’रै प’रिर्वत’न आ’उ’न सक्ने ध’र्मशास्त्रीहरु बता’उँ’छन् ।
रा’त’को स’मय सि’रा’नी मु’नि राखे’का तु’ल’सीका पाँ’च पा’त’ले दि’नभ’रको त’ना’व’लाई हटा’उ’नेछ । यस’को सा’थै दि’मा’गले प’नि शान्त भए’र का’म ग’र्ने विश्वा’स ग’रिन्छ । य’स्तो ग’र्दा त’पाइँ’भित्र भ’ए’को न’करात्म’क श’क्ति ह’टाउँने’छ र व्यापार’मा प’नि धे’रै ब’ढोत्तरीव हुने विश्वास गरिन्छ ।
तुल’सीको’ ‘पातले छाला सम्बन्धि स’मस्या प’नि क’म ‘गर्छ । अनुहा’रमा भ’ए’को खि’ल ‘निकाले’र धे’रै चमक दिन्छ । तुल’सीको फु’ल र पातले म’हिला’ला’ई हुने महि’ना’वारी गड’बडी’को स’मस्या प’नि ”हटाउँछ ।
Prevविदेशवाट फर्केको २० दिनमै श्रीमतिलाई दुई टु’क्रा पा’रे, साढे २ वर्षकी छोरीको बि’च’ल्ली (भिडियो हेर्नुस्)
Next२४ घण्टामा थप ४४९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या ४६६९१
भदौ २५ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल